Raadso daryeel - 1177 Vårdguiden
Söka vård - somaliska
Kani waa 1177 VårdguidenDet här är 1177 - somaliska
Waxaad wici kartaa lambarka telefoonka ee 1177 haddii adiga ama qof qoyskaaga ka mid ah uu jiran yahay. Markaas ayaad talo ka heli kartaa kalkaaliso ku hadasha Ingiriisi ama Iswidhish. Habeen iyo maalinba waad soo wici kartaa. Bogga 1177.se ayaa laga helayaa macluumaad caafimaadka iyo cudurrada ku saabsan.
Sidan ayuu daryeelka bukaanka ee Iswiidhan u shaqeeyaaSå fungerar vården i Sverige - somaliska
Haddii adiga ama qof qoyskaaga ka tirsan uu daryeel caafimaad u baahan yahay ayaad badiyaa caawimo ka heli kartaan xarun caafimaad (vårdcentral). Wac lambarka 1177 haddii aanad hubin meesha aad daryeel caafimaad ka raadsaneyso. Waxaad kula hadli kartaa af Iswiidish ama Ingiriisi. Kalkaalisooyinka ka jawaabaaya ayaa xitaa kaala talin kara waxyaalaha aad adigu sameynayso si aad uga roonaato.
Daryeel caafimaadka ee dadka magangelyo doonka ah ama aan sharciga Iswiidhan haysanVård om du är asylsökande eller inte har tillstånd att vara i Sverige - somaliska